Moa ve ny AIVD nanatsara ny tetika avy any Stasi any Alemana Atsinanana (DDR)?
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 September 2017	• 19 Comments
Ny Stasi no sehatra iraisam-pirenana serasera sy serivisy tandrefana nandritra ny Ady Mangatsiaka, ary noheverina ho mahomby indrindra manerantany. Ny sampan-draharahan'ny Stasi dia sampan-draharaha miafina ary navitrika avy amin'ny KGB an'ny Firaisana Sovietika. Na dia nesorina tamin'ny fomba ofisialy aza ny Stasi tao amin'ny 1990 taorian'ny nianjeran'ny Rindrin'i Berlin, [...]
Ny fahalalaham-pitenenana, ny fitenenana ary ny fisainana dia mety hijanona ao anatin'ny herintaona
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 2 September 2017	• 19 Comments
Raha mieritreritra ianao hoe "Oay, tsy mandeha io fifadian-kanina io", dia tsy nihaino ianao. Manosika ny sorokao ve ianao ary mieritreritra hoe: "Eny ary, azonao lazaina kely fotsiny ny eritreritrao, tsy olona izay tokony hanome ny hevitro amin'ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra", [...]
Misy ve sa tsia ny 'fanararaotana zaza tsy ampy taona sy ny ankizy ankizy?'
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 August 2017	• 27 Comments
Tsy ampy ny tsy fahatakarana kely. Rehefa miteny aho hoe Ronald Bernard dia mpilalao sarimihetsika mampiasa NLP teknika ho lasa Faly Banky mba handresy lahatra ny olona hanatevin-daharana amin'ny tantara izay mahafinaritra tsikombakomba, tsy midika izany hoe fanararaotana ara-nofo sy ny fombafomba sorona ny [...]
Ny adiadin'i Ronald Bernard sy ny fandravana ny teorika ny teorika
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 28 August 2017	• 16 Comments
Rehefa tonga ny aterineto dia nahavariana ary tsy afaka niandry haingana haingana ianao ary afaka nahita sy nifanakalo fanazavana bebe kokoa. Fantatsika ankehitriny fa tsy tsara ho an'ny taranaka ny tanora no fotoana raha tsy misy finday dia mety ho efa lany fotoana mahatsiravina izay tsy tianao ny [...]
Ronald Bernard, Irma Schiffers, Ad Broere, ny Coöperatie Vrije Mediam-bahoaka: AivD fiarovana ny fahadiovan'ny marina?
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 15 August 2017	• 55 Comments
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hiditra amin'ny antsipiriany aho momba ny antony efa nolazaiko tamin'ny lahatsoratra vitsivitsy fa feno haino aman-jery ny fampitam-baovao hafa any Holandy. Miezaka ara-bakiteny ny 'fanaraha-maso ny asa fanompoana miafina' aho. Any Holandy, ny klioba dia antsoina hoe AIVD. Mba hanaporofoana izany, tsy maintsy manana [...]
'Ny solontenan'ny Desinfo sy vahiny' VERSUS 'dia manondro ny tena olana eto amin'izao tontolo izao & tonga amin'ny hetsika'
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 June 2017	• 7 Comments
Amin'izao fotoana izao dia tena tandindona ny miresaka momba ny 'matrix'. Ao amin'ny lahatsoratro farany mikasika an'i Martijn van Staveren, nanazava ny fomba fijerin'ny mpikaroka ny fampiasana ny fampiasana ny tranonkala ho toy ny harato fandriam-pahalemana ho an'ny fifohazana ary avy eo mandefa ny ala tsy mivoatra (antsoina hoe) fahalalana sy vaovao ary manantena ny hisintona [...]
Frans Heslinga ilay tany feno fasika izay manahiran-tsaina ireo mpitsabo saina?
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Jolay 2016	• 24 Comments
Amin'ny ankapobeny, tsara kokoa ny tsy miraharaha ireo karazana clowns ireo, fa i Frans Heslinga dia atosiky ny fampitam-baovao hafa sy ny fampahalalam-baovao mahazatra, izay tsy maintsy anaranao. Toa hita fa nisy tetikasa vaovao iray nataon'i PsyOp (tetik'asa ara-psikolojika) natsangana mba hampifandraisany amin'ny endrika fisainana rehetra amin'ny eritreritra maloto. Ny 'plat [...]
Ny tehezana momba ny latabatra, tsy misy dikany!
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 4 Jolay 2016	• 8 Comments
Tamin'ny herinandro lasa teo, efa niniana aho no nanamarika ilay antsoina hoe 'theory of flat-earth', satria tampoka dia nisy adihevitra goavana hatramin'ny 2015. Mazava ho azy, mazava ho azy, ny teoria iray manontolo momba ny lavaka, izay ho an'ny olona manana fahalalana fototra momba ny matematika sy ny physique dia mety halefa amin'ny tanin'ny fables, fa ny fisehoan'ity 'hetsika' ity [...]
Ny tontolon'ny latabatra na ny teheba Flat Earth dia PsyOp hametraka ireo mpikaroka eo ambanin'ny vondron'olona marary
Filed in [AIVD ALARM], NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 29 June 2016	• 22 Comments
Ny aterineto dia miparitaka amin'ny lahatsary, fantsona YouTube ary blaogy amin'ny aterineto izay toa manadihady lalina ny fomba famaizana ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny lamina napetraka. Ireo fikarohana ireo dia matetika avy amin'ny fikarohana tsara. Ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao anefa dia ny fifandraisana amin'ireo "mpikaroka" izay [...]
Total visits: 14.663.843